ပျက်စီးသွားသောဆံပင်အတွက်အကောင်းဆုံးဆံပင်ထုတ်ကုန် (၁၀) ခု - အလှတရား
အိမ်သုံးဆေးများ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု ဆံပင် နည်းပညာ အပြင်အဆင် #actagainstabuse အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် အစားအသောက် ဖက်ရှင်သတင်း ရုပ်ရှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ပျက်စီးသွားသောဆံပင်အတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန် ၁၀ ခု
ခြောက်သွေ့သောပျက်စီးနေသောဆံပင်များသည်မကောင်းသောအစားအစာမှသည်သံဓာတ်စွဲခြင်းအထိဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်၏ဆံပင်သည်အပူ၊ အရောင်ချွတ်ခြင်း၊ သုတ်ပဝါလိမ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုကဲ့သို့သောယေဘုယျပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောထုတ်ကုန်များရှိသည်။ ဤရွေ့ကားသင်၏အသစ်သွားလာရင်းမှခေါင်းလျှော်ရည်, အေးစက်နှင့်ပျက်စီးဆံပင်အဘို့အအေးစက်နှင့်ကုသမှုဖြစ်ကြသည်။
1. Pureology အဖိုးတန်ရေနံအေးစက်
Pureology သည်ဆံပင်အရောင်ရှိသည့်မည်သူမဆိုအတွက်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကအရောင် (သော့ခတ်ခြင်းမရှိ) သော့ခတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ကမ်းနားလမ်းတစ်ခုစီမှအစွမ်းသတ္တိကိုပြန်လည်ထူထောင်။ The Precious Oil Conditioner သည်ဆံချည်မျှင်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ဆံပင်အရင့်ဆုံးသောဆံပင်ကိုတောင်နူးညံ့စေခြင်း။ လျှို့ဝှက်ချက်? နေကြာနှင့်အုန်းဆီ။ (Psst: Pureology သည်ရေဓာတ်အေးစက်ကိုသေးငယ်သောလတ်ဆတ်သောအနံ့နှင့်သင်၏သော့ခလောက်များအတွက်ခက်ခဲစွာအလုပ်လုပ်သည်။ )
ယခု ၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၂၁)
၂။ Moroccanoil Hydrating Shampoo
သင်၏ဆံပင်သည်ရေငတ်နေလျှင်ပင်သင်၎င်းကိုတစ်ခါတစ်ရံဆေးကြောသန့်ရှင်းရမည်လော။ အကယ်၍ ဤသို့ဖြစ်ပါကအလွန်ခေါင်းလျှော်ရည်ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုရှာဖွေပါ။ သင့်လည်ဆံကိုဆေးကြောခြင်းသည် Moroccanoil Hydrating Shampoo ကဲ့သို့သောအာဟာရဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံးကျန်းမာစေမည်။ ဒီထုတ်ကုန်သည်ဗီတာမင်အေနှင့်အနီရောင်ရေညှိများနှင့်ပြည့်နေပြီး၎င်းသည်ကြိုးမျှင်များထူထပ်သည်။ ဒီခေါင်းလျှော်ရည်ကိုမသုံးပါနဲ့၊ ဆံပင်ကိုနေ့စဉ်ဆေးကြောရင်တောင်ဆံပင်တွေကိုသက်သာစေပါတယ် (ဆံပင်ကိုခဏခဏအနားယူတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမယ့်) ။
ယခု ၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၂၂)
3. ပြင်းထန်စွာပျက်စီးသောဆံပင်အတွက် Nexxus Keraphix အေးစက်
ဆံပင်ရှည်ကျဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဆံပင်သည်ပရိုတိန်းလိုအပ်သည်။ ဒီအေးစက်အေးဆေးတည်ငြိမ်စေတဲ့ keratin protein နဲ့ဆန်အနက်ကိုအသုံးပြုသည်။ Nexxus ၏အဆိုအရဆန်အနက်ရောင်ရှိ glutamic acid သည်ပမာဏနှင့်အရှည်ကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အရေးပါသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်။ Keraphix အေးစက်အားပရိုတင်းများဖြင့်ခိုင်ခံ့စေသော်လည်း၎င်းသည်သုံးပြီးချိန်တွင်အလေးချိန်မရှိသလောက်ဖြစ်နေသည် - ကမ်းနားလမ်းအမျိုးမျိုး၏ ဦး ခေါင်းများအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
ယခု ၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၃၀)
4. ဒါဟာ 10 အံ့ဖွယ် Leave-In ကိုထုတ်ကုန်ပါပဲ
ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်အေးစက်သည့်အပြင်အပြင်၌ထားရှိသောဆေးနှင့်ဆံပင်မျက်နှာဖုံးများသည်သင့်နံနက်ခင်းဖြစ်စဉ်ထက် ကျော်လွန်၍ သင်၏ဆံပင်ကိုဆက်လက်ကုသနိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းသည် frizz ဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏နေရာ ၁၀ နေရာတွင်တည်ရှိသည်။ ဤခွင့်ပြုချက်သည်လေမှုတ်ခြင်းနှင့်ရေမွှားများနှင့်အနာဂတ်ပြိုကွဲခြင်းမှကာကွယ်ရန် flyaways နှင့် sealing cuticles များကိုထိန်းချုပ်သည်။ တကယ့်အံ့ဖွယ်အမှုလား။ ၎င်းသည်အပူကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်ပြားချပ်ချပ်သံကိုမကြာခဏအသုံးပြုပါက၎င်းသည်သင်၏လည်ဆံအားထိခိုက်ပျက်စီးမှုပမာဏကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။
ယခု ၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၉)
5. Redken အစွန်းရောက် Anti-Snap ချိုးဖောက်မှုကို Leave-in ကုသမှု
Redken သည်အရောင်ကာကွယ်မှုနှင့်ပျက်စီးမှုထိန်းချုပ်မှုကိုနားလည်သောအခြားအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်အတွင်းပိုင်းမှပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ကမ်းနားလမ်းတစ်ခုစီသို့နက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်သည်။ သင်၏ဆံပင်သည်အစိုဓာတ်နှင့်ခွန်အားကိုအလွန်လျှင်မြန်စွာရရှိနိုင်ရုံသာမကသင်၏ကြိုးမျှင်များကိုကြည့်ရှုခံစားရမည် ဖြစ်လိမ့်မည် ပရိုတိန်းများနှင့်အတူချောမွေ့ပျော့ပျောင်းခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ကုသမှုရဲ့စွမ်းရည်ကိုကျေးဇူးတင်အပြင်ဘက်အပေါ်) ပိုမိုကျန်းမာ တဖန်သင်တို့အပူဆံပင်ကိရိယာများကိုချစ်လျှင်ဤသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
6. Joico K-Pak နက်ရှိုင်းသောထိုးဖောက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး
မျက်နှာဖုံးများသည်မျက်နှာများအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ Joico K-Pak သည်စင်ကြယ်။ စိုစွတ်သောဆံပင်ကို ဖြတ်၍ ငါးမိနစ်ခန့်စောင့်ပါ၊ ၎င်းသည်ကောင်းသောဆံပင်များဖြင့်ရေးဆွဲထားသော်လည်းအလွန်ကြီးမားသောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒြပ်စင်များမှအနာဂတ်အကာအကွယ်လိုအပ်သောသော့ခလောက်များသည်ဤမျက်နှာဖုံးမှအကျိုးရှိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? အိုအက်မင်အက်စစ် ၁၉ လုံး၊ ညနေခင်း Primrose oil နှင့် aloe extract တို့ကသင့်ဆံပင်ကိုပြန်လည်ခြောက်သွေ့စေရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
ယခု ၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၀)
7. Aussie Paraben- အခမဲ့3Minute Miracle
ဟုတ်ပါတယ်၊ Joico K-Pak ကငါးမိနစ်လောက်ကြာတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကပိုကြီးတဲ့အဆောတလျင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် Aussie ရဲ့မျက်နှာဖုံးကသုံးလုံးပဲလိုတာကြောင့်မင်းကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။ ဤထုတ်ကုန်တွင်အောက်ပါအချက်များပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရသည်မှာလွယ်ကူပါသည်။ ၎င်း၏အမြန်စုပ်ယူမှုပုံသေနည်းသည်သင်၏ဆံပင်ပေါ်သို့ထောပတ်သီးနှင့်ဂျိုဗိုအဆီတို့၏ရေတံခွန်ကိုဖော်ထုတ်သည်။ သင်ခေါင်းလျှော်ရည်ပြီးနောက်ရေချိုးခြင်းကိုသင်အသုံးပြုသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အနည်းဆုံးသုံးမိနစ်ခန့်သင်ထွက်သွားသည့်အေးစက်စက်နှင့်တူသည်။ ဒါဟာလည်းကောင်းကင်ဘုံနဲ့တူတယ်။
ယခု ၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၅)
၈။ Pureology အစွမ်းသတ္တိကိုကုသပေးခြင်း SuperFood Treatment မျက်နှာဖုံး
Pureology သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်နှစ်ကြိမ်အသွင်သဏ္reasonာန်ရှိသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းသည်ကြိုးစား။ မှန်ကန်ပြီး၎င်းသည်အရောင်ဖြင့်ကုသသောဆံပင်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပျက်စီးမှုအများစုမှလာနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဤသည်အလွန်အစားအစာကုသမှုသက်သတ်လွတ်နှင့်ချက်ချင်းကျိုး - ကျိုး strands ပြုပြင်အလုပ်ရမှပါဝင်ပစ္စည်းများအပြည့်အဝ - ကျနော်တို့သံလွင်ဆီ, goji berry သီးထုတ်ယူနှင့်နေကြာမျိုးစေ့ထုတ်ယူပြောနေတာပါ။ လက်ငင်းရလဒ်များကိုကြည့်ပါ။ ဤမျက်နှာဖုံးသည်သင့်အတွက်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အမျှလာမည့်ရက်များစွာအတွက်သူတို့ကိုလေးစားပါ။
၉။ Shea Moisture Manuka ပျားရည်နှင့်မာဖူရီဆီအထူးကြွယ်ဝသောရေဓာတ်ပါ ၀ င်သောဆံပင်ပုံဆောင်
ဤထုတ်ကုန်များမှအဆီများနှင့်အတူဆောင်ပုဒ်သတိထားမိ? Shea Moisture ၏ပျားရည်နှင့် mafura ရေနံမျက်နှာဖုံးသည်၎င်း၏တစ်သက်တာတွင်ပြိုကွဲမှုများစွာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်ဆံပင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Manuka honey သည် anti-inflammatory ဖြစ်ပြီးအရေပြားအပေါ်ယံလွှာခြောက်သွေ့စေသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ခေါင်းဆံသို့မဝင်မီ ဦး ရေပြားသို့ ဦး စွာအနှိပ်ခံရန်ရည်ရွယ်သည်။ Plus အား, ဗီတာမင် C, အော်ဂဲနစ် shea ထောပတ်နှင့်အခြား All- သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။ သင်၏ဆံပင်သည်စူပါဆံပင်ကောက်ကောက်မဟုတ်လျှင်တောင်မှဤသည်မှာကြိုးစားသင့်သည်။
ယခု ၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၂၃)
၁၀။ OGX အထူနှင့်ပြည့်ဝသော Biotin နှင့် Collagen အလေးချိန်မရှိသောအနာရောဂါကုသမှုဆီ
အဆိုပါ buzzwords ရောက်စေဖို့အချိန် ဇီဝဗေဒ နှင့် ကော်လာဂျင် ။ ပုံမှန်အားဖြင့်အရေပြားကုသမှု၊ biotin နှင့် collagen တို့နှင့်ဆက်နွယ်ပြီးကျန်းမာသောဆံပင်အတွက်လည်းအရေးကြီးသည်။ ပုံစံမချမီအာဟာရတန်ချိန်များစွာဖြင့်သူတို့ကိုသုတ်လိမ်းရန်သန့်ရှင်းသော၊ စိုစွတ်သောသော့များမှတဆင့်ဤဆီကိုသုံးပါ (မသုတ်ပါနှင့်) ။ ဗီတာမင် B7 (ခေါ် biotin)၊ ကော်လာဂျင်နှင့်ဂျုံပရိုတိန်းတို့သည်သင်၏ဆံပင်ထဲသို့စုပ်ယူသဖြင့်အချိန်တိုအတွင်းစိမ်းလန်းစိုပြည်သောလည်ဆံသို့သင်ရောက်နေကြောင်းသိရှိခြင်းကလွယ်ကူစွာအနားယူနိုင်သည်။
ယခု ၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၇)
Categories အလုပ်အကိုင်များနှင့်ငွေကြေး အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု နိုင်ငံတကာ
ဒစ္စနေး + တွင်သင်လွှင့်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံး Disney Halloween ရုပ်ရှင် ၂၀
သင်တစ် ဦး Scorpio လက်ထပ်နေလျှင်ကိုင်တွယ်ရန်3နည်းလမ်းများ
၁၁ နာမည်ကြီးနာမည်ကြီးမင်းသမီးများ Bay Bay မှလာသည်ကိုသင်မသိခဲ့ပါ
Kate Upton သည်သူမ၏ Pinterest-Perfect မင်္ဂလာဆောင် of ည့်ခံစားဆင်ယင်ပုံ၏ဓါတ်ပုံအသစ်များကိုရုံတင်လိုက်သည်
မိသားစုထွက်ပြေးရန်အတွက်အကောင်းဆုံး Cabo San Lucas အပန်းဖြေစခန်း ၁၀ ခု
အားလုံးဖလားအရွယ်အစားများအတွက်အကောင်းဆုံးတံဆိပ်ခတ် 19 (Underwire အဆိုးဆုံးသောကြောင့်)
သင် 'ကောင်းသောမိန်းကလေးများ' ကိုချစ်မြတ်နိုးပါကစောင့်ကြည့်ရန်ပြပါ ၅ ။
တစ်မိနစ်ကိုစောင့်ပါ: Varys သည် 'Thrones of Game' တွင်အဆိပ်ပါသော Daenerys များကိုကြိုးစားခဲ့သလား။
ချီကာဂိုမှအကောင်းဆုံး ၁၂ ရက်ခရီးစဉ်
အမျိုးသမီးဖက်ရှင်, အလှအပ, Lifehaki နှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများ
12 ဆက်လက်အားကောင်းနေဆဲနာမည်ကြီး NYC Old စားသောက်ဆိုင်များ
Copyright © မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး | siminbehbahani.com | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ